'तत्काल विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धन सम्भव छैन' - UrjaKhabar 'तत्काल विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धन सम्भव छैन' - UrjaKhabar
‘तत्काल विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धन सम्भव छैन’
काठमाडाैं । बिजुली खपत निकै हुन्छ र राज्यले यसलाई प्रोत्साहन गरेन भन्दै केही समूहले व्यक्तिगत लाभको लागि विभिन्न बहानामा सरकारबाट विद्युतीय सवारीमा कर छुट गराए । यसले राज्यलाई घाटा हुने र फ्यूलबाट चल्ने गाडीलाई तुरुन्त व्यवस्थापन गर्न नसकिने हुँदा गाडी बिक्रीको बजार बिग्रिने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।
गाडीमा लाग्ने कर सायद कुनै पनी देशमा घटाइएको छैन । बरु सहुलियत दिइएको छ । पैसा छ भने यहाँ पनि दिँदा हुञ्छ । विद्युतीय गाडीको भन्सार र अन्य कर घटाउने अनि वार्षिक नवीकरण पनि शून्य वा अति न्यून गर्ने गरिएकाे हुन्छ । बरु फ्यूल गाडीसित नवीकरण करबाहेक कार्बन उत्सर्जनबापत अतिरिक्त कर लिने तर भन्सार र अन्य कर सबै गाडीको बराबर हुनु पर्छ ।
पैसा हुनेसित कर नलिएर के गरिबलाई भोकै राख्ने ? राज्यले उठाउने कर त सबैसित पुग्ने हो । त्यो घटाएर राष्ट्र विकास कसरी हुन्छ ? विद्युत् खपत नै कति हुन्छ ? हिसाब गराैं । अहिले इ-रिक्साले औसत ८ देखि १० मेगावाट खपत गर्छ । प्रत्येक वर्ष आयात हुने4व्हिलर गाडी लगभग ३० हजारले औसत ७५ मेगावाट खपत गर्नेछ । यो भनेको अधिकतम हो, आजदेखि नै फ्यूल गाडी बन्द गर्ने हो भने ।
उर्जा खपत किलाेवाट घन्टा (KWH) मा हुन्छ किलाेवाट वा मेगावाटमा हुँदैन । मेगावाट भनेको ग्राहकलाई आवश्यक हुने अधिकतम माग हो । प्रयोग नै हुन्छ भन्ने होइन । हो, माथि भनिए जस्तै खपत प्रतिघन्टा हो । यदि, उपरोक्त पद्धति अनुसार विद्युतीय गाडी चल्ने हो भने प्रतिघन्टा सय मेगावाट अर्थात् दैनिक २४ लाख युनिट खपत हुन्छ । जुन तत्काल सम्भव छैन ।